Sidee loo maamulaa horumarinta Webka iyo SEO ee habka ugu wanaagsan?
Marka barmaamijka internetka ee kor u kaca ah ee internetka uu ka dhigayo wax badan oo ku saabsan gaadiidka dabiiciga ah sida awoodda tareenka, waa in aad tixgelisaa wadahadalka kooban ee soo socda. Waxaan aaminsanahay in ololaha dallacsiinta isboortiga ee internetka ay tahay inuu had iyo jeer ku tiirsanaado Webka saxda ah iyo horumarinta SEO, labada gacmoodba gacanta ku hay. Aynu wajahno - Mashruuca Mashruuc-raadinta wuxuu ka badan yahay cilmi-baarista muhiimka ah, oo lagu taageeray istiraatiijiga suuq-galinta ee habboon. Laakiin waxaa jira wali farsamo oo aad u badan oo ka soo horjeeda goobta. Laakiin gaar ahaan arrimaha farsamada ayaa go'aaminaya darajo kasta oo boggan ee liiska SERPs. Waxaan ula jeedaa marka aad samaynayso SEO-gaaga, waa inaad marwalba tixgelisaa habka saxda ah ee codsiga bogga internetka oo dhan, laga bilaabo bilowga.
Ku soo dhawoow muujinta
Waxyaabaha ugu horreeya ee loo sameeyo labada bog, iyo horumarinta SEO, waa inaad hubiso qayb kasta oo ka mid ah boggagaaga ayaa ugu yaraan la heli karo si loo soo bandhigo, waxaan loola jeedaa wax aan ka horjoogsanayn robotyada raadinaysa "akhriska" qayb kasta oo xogtaada ah. Sidan oo kale, waxaan kugula talinaynaa inaad isticmaasho "Fetch" oo ku jira qeybta Goobta ee "Search Console" si aad u eegto muuqaalka bilawga ah ee boggaaga, laga soo bilaabo aragtida makiinadaha raadinta. Waxaa jira hal talaabo muhiim ah halkan - iskuday in aad wax walba ku aragto qaabka HTML, si fudud uga fogow Isticmaalka Flash ama Silverlight ee bogagga shabakadda ee muhimadda muhiimka ah. Haddii wax walbaa ay u muuqdaan mid sax ah, oo website-yadaagu ugu yaraan waa la qabsoomi karaa, hoosta waxaad arkaysaa dhowr labbo talooyin gaaban waayo khibrad aad u fiican, iyo sidoo kale rikoorka ugu sarreeya ee la siinayo mashiinnada raadinta. URLs nadiif ah
Boggaga shabakada internetka waa waxyaabaha muhiimka ah ee muhiimka ah, labadaba ee ku saabsan horumarka webka iyo SEO,. Ka dhig URL-yadaada sida ugu fudud ee suurtogalka ah in la fahmo 'robots'ka raadinta, iyo sidoo kale akhristayaasha dhabta ah. Ka takhalus wixii macluumaad ah oo aan loo baahnayn URL, taasoo keeni karta jahwareer ahaan Google ama laftooda booqanaya boggaga internetka. Laga soo bilaabo hal gacan, adigoo aan wax ku oolin ah ee URL-yadaadu waxay dadka ka dhigi doonaan inay yartahay in ay gujiyaan, maaha inay sheegaan wadaagaan. Isla mar ahaantaana, makiinadaha raadinta waxaa laga yaabaa inay muuqdaan dhibaatooyin gaar ah marka ay "fahmayaan" waxay ku habboon tahay eray gaar ah.
Iyadoo la tixgelinayo bogga internetka ee habboon iyo horumarinta SEO, hel URL-yadaada oo la yareeyo xuduudaha soo socda:
Web URL bogga waa inuu ahaadaa mid gaaban oo wargelin ah sida ugu macquulsan. Waxaan kugula talin lahaa inaad ku dhexjirto URL-yadaada oo kaliya ereyada muhiimka ah iyo ereyada ku habboon, si aad ugu habboonaato mawduucaaga internetka.
Waligaa ha lahaadeen URL-yadaada oo ku dheggan ereyada muhiimka ah, sii wad jadwalka sida ugu cad. Sidaa samee, xusuuso inaad ereyada joogsiga ah ka bixiso kharashka oo dhan (sida kuwa ugu badan ee soo socda: "," "," on ", a, etc.)
Had iyo jeer isticmaal sirta si aad u kala soocdo taxanaha ereyga ee URL-yadaada. Ha iloobin qiyaasaha hoosta, maaddaama makiinadaha raadinta ay si dhib leh u aqoonsadaan. Taas dabiiciga ah waxay keeni kartaa dhibaatooyin adag oo adag oo ku iman kara taranka iyo dibudhiska.
Ku ilaali habka muhiimka ah ee ku xeel dheer adigoo adeegsanaya ereyada muhiimka ah ee muhiimada muhiimka u ah bilowga URL kasta. Xusuusnow, in sida ay cilimiga u yihiin, qalabka raadinta raadinta ayaa ah inay xoogga saaraan kuwa iyagu noqon lahaa erayo muhiim ah.
Sidaa awgeed, waxaa jiri doona sabab kale oo aad ku ilaalin karto URL-yadaada sida ugu macquulsan, i. e. , dayactirka iyo kordhinta miisaanka guud ee ereyada muhiimka ah ee URL-yada. Isla mar ahaantaana, si kastaba ha ahaatee, dib u dejin URL-yadaada si dabiici ah, sida haddii ay ahaayeen qaybo ka mid ah qoraalka content. Sidaa darted, waxaad heli doontaa spam kasta ama dhibaatooyinka hoose ee tayada hoose ee hoos u dhaca ugu yaraan Source .